fantsona varahina brazing fampidirana - mpanamboatra milina fanamafisam-peo | vahaolana fanafanana fampidirana
induction bronze pipe pipe
Fanamafisana ny fandefasana entona mandrehitra ny fantsom-basy
Fanamboaran-jiro fanindroany Fanatsarana ny fantson-tsakafo
Ny tanjona dia ny famonoana ireo tonon-taolana marobe amin'ny fantsom-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny induction.
DW-UHF-6kw-III fitaovana fampakarana finday
• fantsom-by (habe 6 x 0.75 mm)
• Volo varahina - 1 mm (CuP7)
DW-UHF-6kw-III fanamoriana fampidirana am-pelatanana dia afaka manasongadina ny tonon-taolana marobe hita eo amin'ny toerana efa voafaritra ao amin'ny fiangonana. Ny peratra firaka vita amin'ny biriky dia apetraka eo amin'ny tonon-taolana alohan'ny fizotran'ny brazing.
Ny rafitra dia afaka ampidirina mba handraisana ny hafainganam-pandaharana samihafa sy ny fivoriana maro samihafa.
Ny kalitao avo lenta sy ny fiverimberenan'ny fiarovan-doha.
Nampitombo ny vokatra.
Ny rafitra flexibilite - dia azo averina mora alamina mba handaminana ny fepetra maromaro.
Sokajy Technologies Tags induction bronze pipe pipe, induction brazing refrigerator, frizôna, fanadiovana hafanana hafanana, Fanamafisana ny fandeferana, refrigeratior varahina sodina brazing